पत्याउनु हुन्छ ? डाक्टरकै अगाडि १४ बर्षका किशोरले अण्डा पारे
कोशी अनलाइन मङ्गलबार, १५ फागुन, २०७४ मा प्रकाशित
एजेन्सी (मिरर डट को डट युके)
मानिसले अण्डा पार्यो भन्ने खबर सुनेर तपाईले कत्ति पनि विश्वास लागेन होला । विश्वास पनि लागोस कसरी ? मान्छेले अण्डा पारेको खबर अहिले सम्म सुनिएको थिएन् । तर यो सत्य हो । इण्डोनेसियामा एकजना किशोरले दुई वर्ष यता अण्डा पारिरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । जुन घटनाले सबैलाई चकित पारेको छ ।
प्रमाणको रुपमा अकमल नामका १४ वर्षका किशोरले अण्डा पारेको भिडियो अनलाइनमा सार्वजनिक गरिएको छ । ती किशोरले डाक्टरकै अगाडि अण्डा पारे । उनले पछिल्लो २ वर्षमा २० वटा अण्डा पारेको दावी उनीसहित उनका परिवारले गरेका छन् ।
डाक्टरकै आँखा अगाडि अकमलले अण्डा पारेपछि डाक्टरहरु नै चकित मात्र होइैन् हैरान पनि भए । तर डाक्टरहरुले मानिसको शरीरबाट चराको जस्तो अण्डा उत्पादन हुने कुरा सम्भव नै नरहेको बताएका छन् । डाक्टरहरुले उल्टै ती युवकले शरीरभित्र अण्डा राखेर आफैले पारेजस्तो गरेर झुक्याएको हुन सक्ने शंका गरेका छन् । तर एउटा अचम्मको कुरा के भने, ती किशोरको शरीरको एक्सरे गर्दा समेत जिउभित्र कुनैपनि त्यस्तो लुकाएको अण्डा फेला परेन ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार एक्स-रे गर्दा भित्र अण्डा पनि देखिएको थियो ।
चिकित्सककै अगाडि अण्डा फोरेर हेर्दा एउटामा भित्रपट्टी पूरै पहेँलो र अर्कोमा भित्रपट्टी पूरै सेतो पाइएको उनका बुवाले जानकारी दिएक छन् ।
अण्डा पार्ने रोगका कारण उनी निकै प्रताडित भएको र उनलाई निकै असह्य पीडा हुने गरेको परिवारले जनाएको छ । ती किशोरलाई स्थानीय एक अस्पतालमा उनलाई भर्ना गरिएको र डाक्टरहरुले उनको उपचार तथा निगारनी गरिरहेको समाचारमा जनाईएको छ ।